အစ္စလာမ်ဘာသာဆွီဒင်ကျော်ယူလိုလား | Apg29
များစွာသောမွတ်စ်လင်ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာမကြာသေးခင်နှစ်တွေအတွင်းရှိပါတယ်ကွာမုန်းတီးမှုနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကနေခရစ်ယာန်လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်တော်မူပြီ။ အဆိုပါအစ္စလာမ္မစ်ခြိမ်းခြောက်မှုတိုးပွါးနေချိန်တွင်အကြောင်း, အမှုအရာများ၏အပြုသဘောဆောင်ခြမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ပေါင်းစည်းမှု - အဓိကပြဿနာ
သိသာထင်ရှားတဲ့ကြောင့်ပေါ့ပေါ့အရေးပါသောပြဿနာယူနိုင်အောင်မတ်မဟုတ်ပါဘူး။ ကြှနျုပျတို့သညျဤလေးနက်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်. အဘယ်သို့ပြုနိုင်သနည်း အဆိုပါဝမ်းနည်းဖွယ်အဖြေကို "အလွန်မဟုတ်" သို့မဟုတ် "လုနီးပါးဘာမျှမ" ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအဆိုးမြင်များအတွက်အကြောင်းပြချက်သောအရာကိုတစ်ဦးသိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်ပါသည်, ပါမောက္ခ Ruud Koopman ကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ သူကဥရောပတိုက်တွင်မွတ်စ်လင်တို့တွင်ပေါင်းစည်းမှုနှင့်ဝါးမြိုခြင်းသုတေသနပြု 20 နှစ်ကျော်ရှိပါတယ်။
နော်ဝေသတင်းစာစာရွက်စာတမ်းခုနှစ်တွင်သူနှင့်အတူတက်လာမယ့်အဘယ်အရာကိုဖတ်နိုင်သည်။ မိမိအနိဂုံးချုပ်ဖြစ်ပါသည်: အစ္စလာမ်ဘာသာဒီမိုကရေစီနှင့်အနောက်တိုင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်အတူ ပြန်. မရခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါဟာအနောက်တိုင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ၏အခြားအုပ်စုများထက်မွတ်စ်လင်ပေါင်းစည်းဖို့ခြောပိုခက်သည်။
ယခုပင်လျှင် 2013 ခုနှစ် Koopman ပူးတွဲစစ်တမ်းနှင့်အတူတစ်ဦးအစီရင်ခံစာသူတွေကိုစစ်တမ်းကောက်ယူမွတ်စလင်များ၏သုံးပုံနှစ်ပုံကဘာသာရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသူတို့တှငျနထေိုငျတိုင်းပြည်၏တရားထက် ပို. အရေးကြီးသောဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ကြောင်းပြသထားတယ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
ဒါကြောင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားယဉ်ကျေးမှု, ဘာသာရေး, နှင့်ဆွီဒင်လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့အတွေးအခေါ်တွေကြောင့်ပဋိပက္ခအကြောင်းကြောင့်ဤဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးကဖြေရှင်းချက်သို့သော်ဖြစ်ပြီး, မွတ်စ်လင်သည်ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုကူးပြောင်းကြလိမ့်မည်သည့်အခါဖြစ်ပါသည်။ ဒီခြေလှမ်းယူကြပြီသောသူတို့အားများစွာသောဥပမာရှိပါတယ်, အကောင်းဆုံးလူ့အဖွဲ့အစည်းသို့ပေါင်းစည်းဖို့စီမံကြပါပြီ။
ပေါင်းစည်းဖို့မလိုချင်ကြဘူးတဲ့သူတွေကို - - ဆက်လက်တည်ရှိဒီနေသော်လည်းကြီးများ၏အရေအတွက်စဉ်တုန်းပဲ, အဲဒီခရစ်ယာန်ဘာသာပြောင်းသူများကိုအများအပြားထုတ်ပယ်ရန်ရွှေ့ပြောင်းဘုတ်အဖွဲ့ကိုရွေးပါ။ ဒါကကြီးကျယ်သောအမှားဖြစ်သက်သေပြနိုင်!
Soheila Fors ဟာသိသိသာသာ FL utet ရှိပါတယ်, သူမအီရန်တှငျမှေးဖှားနှင့်ဆွီဒင်နိုင်ငံမှနောက်ပိုင်းတွင်လေ၏။ ယနေ့တွင်သူမတစ်ဦးတည်ကြည်ခရစ်ယာန်ဖြစ်ပြီးခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်း၏နှစ်ဦးစလုံးအစ္စလာမ်ဘာသာ၏အတှေ့အကွုံရှိပါတယ်။ အဆိုပါကမ္ဘာ့ဖလားအတွက်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ယနေ့တွင်ခုနှစ်တွင်သူမဖြစ်ရပ်တစ်ခုအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားသည်:
ငါ Caucus ခဲ့ရပြီးသူမငါ့ကိုထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရန်ကြွတော်မူသောအခါ "ဒါဟာစတုရန်းအတွက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ကုလားကာအထင်အမြင်သေးအပြုံးကဲ့သို့ဿုံထိုင်လျက်ခဲ့သည်။ ဒီတော့ကြားနာခြင်းမရှိဘဲတစ်ဦးစကားပြောဆိုမှုမဟုတ်ခဲ့သောစကားပြောဆိုမှုပြုခဲ့သည်။ သူမဘယ်နေရာမှာမဆိုရတဲ့မဟုတ်ပါသောအခါ, ခြိမ်းခြောက်ဖို့အချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်: ကျနော်တို့ကျော်ယူကဒီမှာလာကြပြီ။ အဘယ်သူမျှမဆွီဒင်, လူတိုင်းအတွက် Arabic အဘိဓါန်မပြောတတ်သင့်တယ်သင်ယူဖို့ရှိသည်သငျ့သညျ။ ကျနော်တို့အာဏာရှိသည်အခါ, ကိုလည်းကုလားကာဝတ်ဆင်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေပါလိမ့်မည်။
ကျွန်မသူ့ကိုဤမျှလောက်များစွာသောကြိမ်နဲ့တူဤမျှလောက်များစွာသောတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကြောင့်ခေါ်ဆိုမှုငါ့နှုတ်၌မကောင်းတဲ့အရသာကိုပေးတော်မူ၏။ ဒါဟာနှစ်ဦးစလုံး 1980 ခုနှစ်, ထို 2020 ရဲ့ဆွီဒင်အတွက်အီရန်ကအမြဲအတူတူပင်အသံသောဘာသာရေးအာဏာရှင်စနစ်တိရစ္ဆာန်များဖြစ်ပါတယ်။ "
ကျွန်တော်တို့သည်အမည်ရHjällboကနေဂို၏ဆင်ခြေဖုံးဆွီဒင်၏ကွဲပြားခြားနားသောရုပ်ပုံကိုငါပေးမည်။ ကမ္ဘာ့ဖလားယနေ့တွင်သုံးခရစ်ယာန်တွေရင်ပြင်မှာ evangelized သောအခါအဖြစ်ပျက်၏ရုပ်ပုံကိုပေးသည်။
ထိုအခါထိုအရပ်၌ဂိုဏ်းကနေယောက်ျားတစ်ယောက်ကြီး says: "။ သင်ဟာဒီကနေသင်တို့ကိုယူသုံးမိနစ်ခန့်ရှိသည်, သို့မဟုတ်သင်တို့ကိုငါရိုက်လိမ့်မယ်"
အဆိုပါအဖြစ်အပျက်ဿွာန်စဉ်အတွင်းရာအရပျကို ယူ. ဂိုဏ်းကိုလည်းအားလုံးမြန်ဆန်စွာဤနေရာတွင် "အဲဒီထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ကျနော်တို့မွတ်စလင်မ်များဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ကဒီမှာသင်ချင်ကြဘူး။ "
အောက်ပါမှတ်ချက်များမွတ်စလင်များ၏စကားများမြွက်ခဲ့သည်: "။ ကျနော်တို့ကဒီမှာသင်ချင်ကြဘူး" နှင့် "ကျနော်တို့ကကျော်ယူကဒီမှာလာကြပြီ"
အဘယ်သူမျှမဆွီဒင်အစ္စလာမ်မစ်များ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကမ္ဘာ၏တစ်ဦးကာကွယ်ထားထောင့်သည်ဟုမထင်သင့်ပါတယ်။ တစ်ဦးက SAPO အစီရင်ခံစာဆွီဒင်အတွက်အစ္စလာမ်မစ်၏ချွန်ထက်တိုးပြသထားတယ်။
တီဗီတွင်, teletext တော်တော်များများနှင့်အခြားမီဒီယာဆွီဒင်အတွက်အစ္စလာမ်မစ်များ၏အရေအတွက်အပေါ်အက်ဖ်ဘီအိုင်ရဲ့စိုးရိမ်ဖွယ်ရာကိန်းဂဏန်းများ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူဇွန်လ 11 ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Fredrik Hallström, အတိုက်ဖျက်ရေး၏ဒုတိယအကြီးအကဲ says: "။ ကျနော်တို့ကြီးထွားစိတ်ပူနေကြသည်" ဒါဟာကိုလည်းအစီရင်ခံစာတွင်ဆိုသည်: "အဆိုပါအခွင့်အာဏာကိုယခုထိုးစစ်အပေါ်သွားဆွီဒင်အတွက်အစွန်းရောက်အစ္စလာမ်မစ်များ၏အရေအတွက်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်ရာပေါင်းများစွာမှ, မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းသိသိသာသာတိုးပွားလာ ထောင်ပေါင်းများစွာသော။ မေလမှာတော့ပြီးသားကိုခြောက်ထင်ရှားတဲ့အစ္စလာမ်မစ်ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ကြပါတယ်။ "
ထောင်ပေါင်းများစွာသောယခုရှိပါတယ် (!) အစ္စလာမ်မစ်ဆွီဒင်၌တည်၏။ ဤအရာတစျခုကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ၏လုံခြုံရေးတစ်ဦးအလားအလာခြိမ်းခြောက်မှုဖွဲ့စည်းဖို့ကဆိုပါတယ်နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာကျမတို့ကလည်းဘယ်လမ်းအတွက်ဆောင်ရွက်ရန်အစွန်းရောက်အစ္စလာမ်မစ်ကြည့်ရှုရန်စတင်နိုင်မီဖြစ်ကောင်းအချိန်ကသာတဲ့ကိစ္စပါပဲ။
ဇွန်လထဲမှာ, လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုနှစ်ခုအီ (!), ဗလီအတွင်းတက်ကြွစွာခဲ့သူကားအဘယ်သူထုတ်ပယ်ရန်။ အစွန်းရောက်အစ္စလာမ္မစ်ပတ်ဝန်းကျင်အခြားအဖွဲ့ဝင်များကိုလည်းလုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုအားဖြင့်ထိန်းသိမ်းခံခဲ့သညျ။